Ururka Shaqaalaha Adduunka "ILO" oo kadigay dhibaato soo wajjihi doonta shaqaalaha caalamka - Tilmaan Media
Ururka Shaqaalaha Aduunka “ILO” ayaa kadigay in shaqaalaha caalamku wajjahayaan xaaladdii ugu adkayd tan iyo dagaalkii labaad ee caalamka kadib. Ururka ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in Koroona Fayras COVID19 uu khattar galinayo shaqada 1.25 bilyan oo shaqaale dunida oo dhan.
Ururku wuxuu sheegay in tallaabooyinka dawladuhu qaateen si ay u xakkameeyaan Fayraska ay sababi doonaan hoos udhac saacadaha shaqo %6.7 oo u dhiganta shaqada 195 milyan oo shaqaale.
Warbixinta waa lagu daray in afar kamid ah shantii shaqaale ee caalamka ay ku noolyihiin, dal si dhamaystiran shaqooyinka loo xiray ama dal qayb ahaan shaqooyinku taagan yihiin. Waxaa lafilayaa dhaqaale xumada ka dhalata Korona Fayras ay ka baaxad waynaato dhaqaale xumadii sanadihii 2008-2009
warbixintaan ayaa kusoo aadaysaa xilli dadka uu kudhacay Karona Fayras ay ku dhawyihiin hal malyan iyo bar bukaan ah, dhimashaduna gaartay illaa todobaatan iyo shan kun oo ruux.
Tilmaan Media (Istanbul)
Somalia oo xirtay xuduuda ay la wadaagto dalka Kenya